Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, May 28, 2011 Saturday, May 28, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ရွှေဆိုသည့်အရာသည် ဟိုးယခင်ရှေးခေတ်ကတည်းက အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား သုံးစွဲခဲ့ကြသော သတ္တု တစ်မျိုးဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သော ခေတ်တွင်တော့ ရွှေဟူသည်မှာ မင်းစိုးရာဇာ သူဌေးသူကြွယ် တော်ဝင် အသိုင်းအဝိုင်းတွင်သာ သုံးစွဲဝတ်ဆင်နိုင်သော အဖိုးတန် ရတနာဖြစ်လေသည်။ ရာထူးအာဏာ ကြီးမားသူ၊ ဂုဏ်ဓန ကြွယ်ဝသူ တတ်နိုင်ကြသည့် လူချမ်းသာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ လူတန်းစားများက ချမ်းသာလျှင် ချမ်းသာသလောက် သိုင်းဝိုင်း ချဲ့ထွင်ကာ ရွှေထည်ပစ္စည်းများကို ချမ်းသာခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း၏ ပြယုဒ်အဖြစ် ဝံ့ကြွားစွာ သုံးစွဲခဲ့ကြလေသည်။
ယခုခေတ်တွင် ငွေကြေးကြွယ်ဝသူများက ရွှေကို အသုံးအဆောင်ပြုလုပ် ၀တ်ဆင်သုံးစွဲရုံသာ အားမရဘဲ အစားအသောက်များတွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထည့်သွင်းကာ စားသောက်ဖို့ ကြံစည်ကြပြန်လေသည်။ ရွှေကို အလွန်နူးညံ့သော အမှုန်ကလေးများဖြစ်အောင် သန့်စင်ပြုပြင်ပြီး ချောကလက်၊ ကိတ်မုန့်၊ အဖျော်ယမကာများ စသည့် အမျိုးမျိုးသော စားသောက်ဖွယ်ရာများတွင် ထည့်သွင်းကာ ဈေးကြီးသော စားသောက်ဖွယ်ရာအဖြစ် ငွေကြေးချမ်းသာသူများက ပကာသနသက်သက် ဂုဏ်ဓနဖက်၍ လူအများရှေ့ စားသုံးကြလေတော့သည်။ ရွှေကို စားသောက်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူး မယ်မယ်ရရဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရသလို စားသည့်လူအား မည်သို့မည်ပုံ ထိခိုက်နိုင်သည်ဟူ၍လည်း မတွေ့ရပါ။ လှချက်ရက် စက်စက်ယိုကြသူများကျတော့ ရွှေမှုန်သွင်းလျှင် မျက်နှာအသားအရေ လှပသည်ဟုဆိုကာ မျက်နှာပြင်အား ရွှေသွင်းကြပြန်လေသည်။ ရွှေသွင်းခြင်းအားဖြင့် ပိုလှလာသည် မလှလာသည်တော့ မသိ။ အချို့မှာ side effect ကို ခံစားရပြီး မျက်နှာပြင်တွင် အဖုများ ပိုမိုပေါက်လာခြင်း၊ ချွေးပေါက်ပိုကျယ်လာခြင်းတို့ ဖြစ်လာကြောင်းကိုတော့ မကြာခန ကြားဖူးနေရသည်။ ရွှေကို အစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာများတွင် မည်ကဲ့သို့ ထည့်သွင်းစားသောက်ကြသည်ကို ဖော်ပြရလျှင်
ဒေါ်လာ ၁၀၀၀တန်ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ရေခဲမုန့်ပါ။ ရွှေမှုန်လေးတွေ ပါဝင်သည်
Glasgow ရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ရောင်းချသော ဒေါ်လာ ၅၀၀၀တန် ရွှေပြားလေးများ ပါဝင်သည့် ပီဇာဖြစ်သည်။
ကျန်ရှိနေသေးသော ရွှေမှုန်များ ပါဝင်သည့် စားသောက်ဖွယ်ရာများမှာ...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, May 26, 2011 Thursday, May 26, 2011 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ
တကယ်လို့များ သင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အားလုံး ပြည့်စုံနေတဲ့ သူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ဖြစ်မြောက်လာအောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့်များ မဖြစ်လာနိုင်ရမှာလဲနော်။ လူတစ်ယောက်ဟာ လက်နှစ်ဘက် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်တောင် အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ ပန်းချီဆရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ လက်နှစ်ဘက် မရှိပေမဲ့ ပန်းချီကားတွေ ရေးဆွဲနေတဲ့ သူ့နံမည်က ဟွမ်ကော်ဖု ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကြိုးစားချင်စိတ်၊ အောင်မြင်ချင်စိတ်သာ ပြင်းပြင်းပြပြ ရှိမယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်မတို့အားလုံးကို သင်ခန်းစားပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘာတွေ ထူးခြားတဲ့သူလည်း ဆိုတာ သူ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည် ချုံကျင်းပြည်က မြို့ငယ်လေးတစ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဟွမ်ဟာ ကလေးဘ၀ အသက်လေးနှစ်အရွယ်မှာ ပြင်းထန်စွာ ဓာတ်လိုက်ခံရပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်လုံး ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ လက်နှစ်ဖက်လုံး မရှိတော့ပေမဲ့ သူ့အိပ်မက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိတာကြောင့် ဘ၀ကို ဒီအတိုင်း မကုန်ဆုံးစေဘဲ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်မှာ ပန်းချီကားများကို ခြေထောက်နဲ့ စတင် ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပါတော့တယ်။ စစချင်းမှာတော့ အခက်အခဲများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရသလို သူ့ပန်းချီးကားတွေဟာလည်း ဘာကိုဆွဲလို့ ဆွဲမှန်းမသိလောက်အောင် ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟွမ်ဟာ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ အချို့ညတွေဆို တစ်ညလုံး မအိပ်ဘဲလေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားရေးဆွဲရင်းနဲ့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကုန်လွန်လာတိုင်း သူ့လက်ရာဟာ တိုးတက်လာပါတယ်။
သူဟာ ပန်းချီကားတွေ များစွာ လေ့ကျင့်ရေးဆွဲနေရင်း တစ်ဖက်က ကျောင်းလည်း တက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သူ့ရဲ့ ၀ါသနာနဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားနေတုန်း သူ့အသက် ၁၈နှစ်မှာ သူ့ရဲ့ ဖခင်ဟာ အပြင်းအထန် နေမကောင်းဖြစ်လာတာကြောင့် ဆေးကုသခံယူဖို့အတွက် ငွေကြေးလိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ကျောင်းထွကလိုက်ပြီး တရုတ်ပြည်ရဲ့ မြို့ကြီးတွေကို လှည့်လှည်ကာ ပန်းချီဆွဲရင်း ငွေရှာနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ လူစည်ကားရာ လမ်းဘေးတွေမှာထိုင်ပြီး ပန်းချီကားအမျိုးမျိုးကို ရေးဆွဲကာ ဖြတ်သန်း သွားလာသူတွေကို ရောင်းချပါတော့တယ်။ အများစုက လက်နှစ်ဖက် မရှိဘဲ ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ သူ့ကို သနားကြင်နာစိတ်၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တို့ဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ခရီးသွားလှည့်လှည်ပြီး ခြေထောက်အသုံးပြုပြီး ပန်းချီကားတွေကို ရေးဆွဲနေရင်းမှာဘဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံက “ပန်းချီကားတွေဟာ ခြေထောက်နဲ့ ဆွဲတာဖြစ်လို့ သိပ်ပြီး သပ်ရပ်တိကျမှု မရှိဘူး၊ ဆွဲနည်းကို ပြောင်းရင်ကောင်းမယ် ”ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူက စုတ်တံကို ပါးစပ်မှာ ကိုက်ပြီး ပန်းချီရေးဆွဲတဲ့နည်းကို လေ့ကျင့်ပြန်ပါတော့တယ်။ တကယ်လဲ ပါးစပ်နဲ့ ပန်းချီဆွဲတာဟာ ခြေထောက်နဲ့ ဆွဲတာထက် ပိုပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ကာ အဆင်ပြေချောမွေ့တယ်ဆိုတာ သူက သိလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ပါးစပ်နဲ့ ရေးဆွဲရတာကို အလေ့အကျင့်များစွာ ရလာပြီး အလွန်ကောင်းမွန်လက်ရာမြောက်တဲ့ ပန်းချီကားများကို ညာခြေနဲ့ရော ပါးစပ်နဲ့ပါ အသုံးပြုပြီး ရေးဆွဲလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပါးစပ်ဖြင့် စုတ်တံကို ကိုက်ကာ ပန်းချီရေးနေစဉ်
ပန်းချီကားတွေ ရေးဆွဲ လှည့်လှည်တဲ့ ဟွမ်ရဲ့  ခရီးမှာဘဲ စီချွမ်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တစ်ခုအရောက်မှာ ချစ်စဖွယ် အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမိကြပါတယ်။ အဲဒီ မိန်းခလေးဟာ ဟွမ်ရဲ့ မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လနဲ့ ပါရမီ ထက်သန်ပုံတို့ကို လေးစားချီးကျူးမိကာ လျှင်မြန်စွာဘဲ မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်မိပါတော့တယ်။ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ လက်ထပ်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, May 24, 2011 Tuesday, May 24, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ကျွန်မတို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ နေစင်္ကြာဝဠာအတွင်းမှာ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှု အများဆုံး ဂြိုလ်တစ်ခုရယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်အောင် တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားများမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကတည်းက မီးတောင်၊ လေမုန်တိုင်း၊ ရာသီဥတု၊ နေ၊ စသော သဘာဝတရားများ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ တိုက်စားမှုတို့ကြောင့် မြေမျက်နှာပြင်မှာ ပုံသဏ္ဍာန် ခဲ့ရပါတယ်။ ၄င်းဖြစ်စဉ်များထဲမှ အချို့သော ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲငင်အားကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ဟန်ချက်ညီနေသော အနေအထားအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတလွှားက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ဟန်ချက်ညီ ကျောက်တုံးများအကြောင်း ဒီတစ်ပတ် ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာ အဖြစ် ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
1. Balanced Rock Colorado
ပထမဦးဆုံး ဖော်ပြမဲ့ ကျောက်တုံးက ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရှိ The Garden of Gods ဥယျာဉ်ထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ ကျောက်တုံးဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ အောက်ခံကျောက်တုံးပေါ်မှာ ဟန်ချက်ညီစွာ တည်ရှိနေတာမို့ မြေငလျှင်များသာ လှုပ်ခဲ့ရင် စိုးရိမ်ရမဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောက်တုံးရှိရာနေရာဟာ လမ်းမကြီးရဲ့ ဘေးနားမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် လှပတဲ့ သဘာဝရှုခင်းများ ရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှု အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုထဲမှာ ပါသလို ၄င်းကျောက်တုံးကြီးဟာလည်း ဓာတ်ပုံအရိုက်ရဆုံး နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
2. Balancing Rock, Digby, Nova Scotia, Canada
ကနေဒါနိုင်ငံ Nova Scotia , Digbyက တံငါရွာလေးအနီးမှာ ရှိတဲ့ ဟန်ချက်ညီ ကျောက်တုံးကလည်း တမူထူးခြားပါတယ်။ ခဲတံချောင်းသဖွယ် ဒေါင်လိုက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ၄င်း ကျောက်တုံး ဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်က ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ တစ်ဝက်ခန့်သာ တင်နေပြီး အခြားတစ်ဖက်က လေထဲမှာရောက်နေတာကြောင့် ပြုတ်ကျတော့မည်ကဲ့သို့ အသည်းယားစဖွယ် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခဲတံတစ်ချောင်းတော့ဖြင့် မဟုတ်ပါ။ တန်ချိန်များစွာ လေးလံလှသော ကျောက်တုံးကြီး တစ်တုံးသာဖြစ်ပြီး မည်သည့်အထောက်အပံ့မှ မရှိဘဲ သဘာဝဘေးရန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ မတ်မတ်ရပ်တည် နေနိုင်ခဲ့တာဟာလည်း ထူးခြားဆန်းကြယ်လို့နေပါတယ်။
3. Idol Rock, Brimham Moor, North Yorkshire, UK
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ယောခ့်ရှိုင်းယားနယ်ရဲ့ မြောက်ဖက် Brimham Moor ဒေသမှာ ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေတဲ့ ကျောက်တုံးအကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြရရင် ပိရမစ်ပုံ အောက်ခံ ကျောက်သားခပ်ချွန်ချွန်သေးသေးပေါ်မှာ တန်၂၀မျှ လေးလံကြီးမားလှတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီး ဟန်ချက်ညီညီ တည်ရှိနေပုံကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆန်းကျယ်တဲ့ သဘာဝတရားကို တွေ့ရချိန်မှာ သင်ကိုယ်တိုင် အံ့သြမိမှာ သေချာလောက်အောင် ထူးခြား ဆန်းကျယ်လို့နေပါတယ်။
4. El Torcal de Antequera, Andalucia, Spain
ကျောက်တုံးမျှော်စင်လို့ ခေါ်ရလောက်အောင် အထပ်ထပ်သော ကျောက်သားတွေ တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် မြင့်တက်ကာ တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကဲ့သို့ ကျောက်သားများ အထပ်ထပ် မြင့်တက်နေခြင်းဟာ တစ်နေရာတည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျောက်သားများဟာလည်း ယခုကဲ့သလို့ပင် စီကာရီကာ မြင့်တက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Kjeragbolten, Norway
မကြောက်ဖူးလား မသိး)
အလွန်ကြီးမားတဲ့ ကျောက်တောင်ကြီး ၂ခုကြားမှာ အကျယ်အ၀န်း ၅မီတာခန့် ရှိတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးဟာ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, May 21, 2011 Saturday, May 21, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ မချောတစ်ယောက် တောင်အောက်ကို ပြန်မဆင်းရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပိုစ့်မှာတော့ တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ ကျွန်မ တောင်အောက်ကို ပြန်ဆင်းပါတော့မယ်။ တောင်အဆင်းမှာတော့ လမ်းတစ်လျှောက် တွေ့မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းလေးများအကြောင်းနဲ့ တောင်ပေါ်ကလှမ်းမြင်ရတဲ့ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း လွင်ပြင်တစ်လျှောက်ရဲ့ အလှအပတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တစ်လမ်းလုံး မြင်တွေ့ရတဲ့ မြေပဲယိုလမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ ဒီကျောက်ကြမ်းခင်းလမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် ရှင်းပြရရင် ဒီလမ်းတွေဟာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက ခင်းထားပေးတာဖြစ်ပြီး ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် သူတို့တွေဟာ သဘောထားပြည့်ဝလွန်းစွာ အလကားခင်းပေးတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆစရာ ရှိပါတယ်။ သို့သော် တကယ်တမ်းမှာတော့ သူတို့နိုင်ငံထဲက ထွက်ကုန်တွေ ဒီဘက်တိုင်းပြည်ထဲကို မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ စီးဆင်းစေဖို့ရယ်၊ တောတောင်တွေ ပေါလှတဲ့ ဒီဒေသက ကျွန်းနဲ့ အခြားသော အဖိုးတန်သစ်တွေ သူတို့ဘက်ကို ခိုးထုတ်သူတွေ ထုတ်ရလွယ်ကူအောင်ရယ်၊ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ငှက်ပျောခင်းတွေထဲက ငှက်ပျောခိုင်တွေ ကားကြီးကားငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ သူတို့ဆီကို ပြန်သယ်သွားရ လွယ်ကူအောင် စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ခင်းပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗန်းမော်မြို့က ဌာနဆိုင်ရာ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သုံးသပ်ပြပါတယ်။
ငှက်ပျောခင်းတွေဟာ သူတို့က ပျိုးပင်နဲ့ နည်းပညာပေးပြီး ကျွန်မတို့ပိုင်တဲ့ မြေကြီးကို အငှားနဲ့ လာရောက် စိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. ထွက်သမျှ ငှက်ပျောခိုင်တွေကို သူတို့ဘက်ကို ပြန်ပြီး သယ်ယူသွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ဒေသခံတွေ ပြောကြတာတော့ အဲဒီ ငှက်ပျောမျိုး စိုက်ပျိုးပြီးတဲ့ မြေဟာ အခြား ဘယ်လိုအပင်မှ စိုက်ပျိုးမဖြစ်ထွန်းဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့မဟုတ်တော့ ဒီစကားဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ လမ်းတွေက ကြည့်ရတာ ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ကျောက်တွေကို မျက်နှာပြင်ညီညာအောင် သေချာ စီရီပြီး ခင်းထားတာဖြစ်လို့ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်မနေဘဲ ကားတွေ အမြန်နှုန်းနဲ့ မောင်းလို့ရတဲ့အထိ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ရေတိုက်စားမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘယ်လောက်ပင် ကောင်းမွန်သည်ဖြစ်စေ ဒီလမ်းပေါ်ကနေ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန် ကျွန်းသစ်များနဲ့ အခြားသော တန်ဖိုးရှိ သစ်များ တစ်ဖက်နိုင်ငံကို အလုံးအရင်းနဲ့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီလမ်းခင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သင့်ပါရဲ့လားလို့ စဉ်းစားစရာပါ။
သစ်တောရဲ့ အချို့သော သစ်ပင်တွေရဲ့ သစ်ရွက်တွေဟာ နီတစ်ချို့ဝါတစ်လီနဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို လှနေပါသေးတယ်
မှိုင်းညို့နေတဲ့ တောင်တန်းတွေ တောအုပ်တွေကို ကျော်လွန်လို့ မြေအနည်းငယ် ပြန့်တဲ့နေရာကို ရောက်လာတဲ့အခါ စမ်းချောင်းလေးများ ဥယျာဉ်စိုက်ခင်းများကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ လမ်းဘေးတစ်လျှောက် စီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းငယ်လေးတွေကို မြင်ရတာဟာလည်း စိတ်အေးချမ်းဖို့ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ဥယျာဉ်ခြံထဲက စိမ်းဖန့်ဖန့် အပင်တွေကို တွေ့ရတော ဘာပင်တွေလဲလို့ ကားဆရာထံ စပ်စုကြည့်တော့
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, May 19, 2011 Thursday, May 19, 2011 Labels: ရသစာစုများ
ညနက်သန်းကောင် အေးစက်နေသော လေတွေသည် Dallas ရဲ့ ဆေးရုံသေးသေးလေးတစ်ခုတွင် ရောက်နေသော ဒိုင်ယာနာ၏ အခန်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခပ်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လို့ နေခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှ ထုတ်ယူခြင်း ခံထားရတာ မကြာသေးသော သူမသည် မူးနောက်ရီဝေနေသော အရှိန်က မပြယ်သေးပေ။ သူမယောက်ျား ဒေးဗစ်က သူမရဲ့ လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဘေးနားကနေ တစ်ဖွဖွ အားပေးစကား ပြောနေခဲ့သော်လည်း သူမရင်ထဲမှာတော့ မကြာခင်ကမှ ခွဲပြီး မွေးလိုက်ရတဲ့ သမီးလေးအတွက် ပူပင်သောကတွေ ရင်နဲ့မမျှအောင် ခံစားနေမိရသည်။
သူမသမီးလေးသည် ကိုယ်ဝန် ၂၄ပတ်ဖြင့်သာ အချိန်မတိုင်ခင် စောစီးစွာ မွေးဖွားလာခဲ့သောကြောင့် အလွန်သေးငယ်ပြီး ပေါင်ချိန်မှာလည်း တစ်ပေါင်နှင့် ၉အောင်စသာ ရှိနေခဲ့သည်။ ဆရာဝန်က သူမတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ နူးညံ့ညင်သာသော စကားလုံးများဖြင့် နှစ်သိမ့်ပြောကြားလာသော်လည်း သူမတို့နားတွင်တော့ ဗုံးကွဲသည်ထက် ပြင်းထန်လို့ နေခဲ့သည်။ “သူမတို့သမီးလေးသည် ထိုနေ့ညထက် ကျော်လွန်ပြီး အသက်ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်အရေးမှာ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်ဟု ဆိုလေသည်။ အကယ်၍ ကံကောင်းထောက်မပြီး အသက်ရှင်သန်ခဲ့လျှင်တောင်မှ သူမလေး၏ ဘ၀သည် အခြားကလေးငယ်များလို လှပသော အနာဂတ် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ စကားလည်း မပြောနိုင်၊ လမ်းလည်း မလျှောက်နိုင်၊ အသိဥာဏ်လည်း အခြားသူများလို ပြည့်ဝနိုင်မည် မဟုတ်သလို မျက်စိပင် မြင်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ် ” စသဖြင့် သမီးလေး၏ ဆိုးဝါးသော အနာဂတ်အကြောင်း ဆရာဝန်က ရှင်းပြလေသည်။
ဆရာဝန်ပြောသမျှ စကားကို ဒိုင်ယာနာကတော့ မယုံကြည်နိုင်ခြင်းများစွာဖြင့် “မဖြစ်နိုင်ဘူး.. မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဟု သွေးရူးသွေးတန်း အသွင်သား ငြင်းဆိုနေခဲ့မိတော့သည်။ သူမတို့ သမီးလေးတွင် ထိုမျှလောက်ဆိုးဝါးသော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်ဟု သူမ မယုံကြည်နိုင်ပါ။ သူမရယ် သူမယောက်ျား ဒေးဗစ်ရယ်၊ ငါးနှစ်အရွယ် သားလေးတို့သည် သမီးလေးတစ်ယောက် တိုးလာမည့် မိသားစု လေးယောက်ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ကြဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြတာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ ခုတော့ ထိုအိပ်မက်သည် ဆရာဝန်၏ စကားအောက်မှာ တစ်စစီ ပြိုကွဲ ပျောက်ကွယ် ရပေတော့မည်။ သူမ စိတ်ကူးယဉ်မျှော်လင့်ခဲ့ရသော အိပ်မက်ကိုဖြင့် လွယ်လွယ်နှင့် လက်မလျှော့ချင်ပါ။ သူမတို့ မိသားစုအားလုံး တစ်ညလုံး မအိပ်နိုင်ဘဲ သမီးလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့် ကြည့်နေမိသလို သမီးလေးအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးနေခဲ့မိသည်။
သမီးလေးသည် အသက်ကို မျှဉ်းမျှဉ်းကလေးရှူကာ သူမ၏ အနာဂတ်ကို ဘာမှမသိနိုင်စွာ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး အိပ်နေခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှု ဘာတစ်ခုမှ မရှိ။ ဒိုင်ယာနာမှာလည်း အိပ်ပျော်လိုက် နိုးထလိုက်ဖြင့် တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့သလို မနက်အာရုဏ်တက်လာချိန်တွင်တော့ သူမသမီးလေး အသက် ရှင်သန်ရမည် ဆိုသော ယုံကြည်မှုကို ပိုမို ခိုင်မာလာခဲ့သည်။ သူမတို့ သမီးလေးသည် အများသူငှာလို ကျန်းမာသော၊ ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိမ့်မည်ဟုသာ သူမ တွေးချင် ယုံကြည်ချင်မိပါသည်။ သို့သော်လည်း ဒေးဗစ်ကတော့ အသုဘ စီစဉ်သောအဖွဲ့နှင့် ကြိုတင်စီစဉ်စရာရှိတာ စီစဉ်ထားသင့်သည်ဟု ထင်မိသည်။ သူ့သမီးလေးအသက်ရှင်သန်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်မရှိသလောက် နည်းနေပြီဟု ဆရာဝန်က ပြောထားသည် မဟုတ်လားလေ။
ဒိုင်ယာနာကတော့ ဒေးဗစ်မျှော်လင့်သလို သူမက မမျှော်လင့်ချင်ပါ။ ဆရာဝန်တွေ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့ကြသည်ကို သူမ သိပါသည်။ သို့သော်လည်း သူမတို့၏ သမီးလေး ဆက်လက် မရှင်သန်နိုင်တော့ဘူး ဆိုသည့်စကားကိုတော့ သူမ မကြားလို၊ နားလည်း မထောင်လို။ ထို့ကြောင့် ဒေးဗစ်ကို သူမ ပြောမိသည်က “ ကျွန်မတော့ လက်မလျော့ဘူး။ ကျွန်မသမီးလေး အသက်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြစ်ဟာ ဖြစ်ကို ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာဝန် ဘာပြောပြော ကျွန်မ လက်မခံနိုင်ဘူး ။ ကျွန်မတို့သမီးလေးဟာ အသက်ဆက်ပြီး ရှင်သန်ရမယ်။ မကြာခင် ဆေးရုံကနေ ကျွန်မတို့နဲ့အတူတူ အိမ်ပြန်ခွင့်ရလာမယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်တယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာ သမီးလေးဟာ အများတကာ မိန်းခလေးငယ်တွေလို သမီးလေးဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ကြီးထွားလာမှာ” ။
ဒိုင်ယာနာဟာ သမီးလေးရဲ့ အနားကနေ တစ်ဖဝါးမှ မခွာဘဲ အချိန်တိုင်း သမီးလေး၏ ဘေးနားတွင် ထိုင်ကာ စကားတွေ တစ်တွတ်တွတ် ဆိုနေခဲ့သလို ဆရာဝန်တွေကိုလည်း သမီးလေးအတွက် လိုအပ်သော ကုသမှုအားလုံးကို ပြုလုပ်ပေးဖို့ အသနားခံ တောင်းဆိုလေသည်။ ဒိုင်ယာနာ၏ ထက်သန်သော ဇွဲ၊ ယုံကြည်မှု၊ မေတ္တာတရား၊ တောင်းပန်မှုတို့ကြောင့် ဆရာဝန်တွေသည်လည်း အလွန်သေးကွေးလှသော ကလေးလေးအတွက် စက်ကိရိယာ၊ ဆေးဝါး၊ ကုသမှု စသော လိုအပ်တာ မှန်သမျှကို လုပ်ပေးခဲ့ကြသော်လည်း သမီးလေးမှာ အနည်းငယ်လေးတောင် လှုပ်ရှားမှု ရှိမလာ။ သို့သော် အသက်တော့ မှန်မှန်ရှူနေခဲ့သည်။ သမီးလေးမှာ ဖွဖွလေး နမ်းခြင်း၊ ညင်သာစွာ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ခြင်း တို့ကိုပင် ခန္ဓာကိုယ်က လုံးဝ ခံနိုင်ရည်မရှိဟု ဆရာဝန်တို့က ပြောကြားပြီးနောက် ကလေးလေးကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုဖို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ထားသည်။ နောက်တစ်ရက်တွင်တော့ သမီးလေးကို အလင်းရောင်ပေးထားသော ဖန်ပေါင်းချောင် လေးထဲတွင် ထည့်ထားလိုက်လေတော့သည်။ အနည်းငယ်လေးတောင် လှုပ်ရှားမှုမရှိသော သမီးလေးကို ကြည့်ကာ မျက်ရည်သွင်သွင် စီးကျရင်းသာ သမီးလေးအသက်ရှင်သန်ဖို့ ဆုတောင်းနေမိတော့သည်။
တစ်ပတ်ခန့် ကျော်လွန်လာသည့်အချိန်တွင် သမီးလေးမှာ တစ်အောင်စခန့် ပေါင်ချိန်အနည်းငယ် တိုးလာပြီဟု ဆရာဝန်က အသိပေးလေသည်။ ဆေးရုံတွင် နှစ်လခန့် အချိန်ကုန်သွားပြီးနောက်တွင်တော့ ဒိုင်ယာနာ၏ သမီးငယ်လေးမှာ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်လာခဲ့လေပြီ။ ထိုချိန်ကျမှ သူမတို့မှာ သမီးလေးကို လက်မောင်းပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံး အနေနှင့် ပွေ့ချီခွင့်ရကြလေတော့သည်။ သို့သော်လည်း ဆရာဝန်များမှာ သူမတို့သမီးလေးသည် အခြားသော ကလေးငယ်များလို ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်း ကြီးထွားနိုင်ဖို့တော့ အခွင့်အရေး အလွန်နည်းကြောင်း ပြောဆိုနေတုန်းသာ ရှိလေသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင်တော့ သမီးလေသည် မိခင်ဖြစ်သူ ခန့်မှန်းသကဲ့သို့ပင် ဆေးရုံမှ အိမ်သို့ ဆင်းခွင့်ရခဲ့လေတော့သည်။ သို့သော် တဖြေးဖြေး ကြီးပြင်းလာမည့် သမီးလေးသည် အများသူငှာကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားလာပါ့မလား.. ဦးနှောက်အသိဥာဏ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါ့မလား ဟူ၍ စိုးရိမ်နေရပေဦးတော့မည်။
တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် သမီးလေး အဲန်နီသည် ကိုယ်လုံးသေးသွယ်သော်လည်း မီးခိုးဖျော့ဖျော့ မျက်ဝန်းလေးများနှင့် တက်ကြွသော၊ ငယ်ရွယ်နုပျိုသော မိန်းခလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဒေးဗစ် မရှိတော့သည့် နောက်ပိုင်းတွင် သူမတစ်ယောက်တည်း သားနှင့် သမီးတို့ကို လူလား မြောက်အောင် ပြုစုစောင့်ရှောက် ကျွေးမွေးလာခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် သူမ၏ သမီးလေး အဲန်နီတွင် စိတ်မူမမှန်သော လက္ခဏာများ၊ ဦးနှောက်မပြည့်သည့် အနေအထား စသည်ဖြင့် ဘာတစ်ခုမှ ရှိမနေသလို လောကကြီး အကြောင်း ပျော်ရွှင်စွာ၊ ရင်ခုန်စွာ၊ စူးစမ်းလိုစိတ်များစွာတို့ဖြင့် သင်ယူလေ့လာရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော မိန်းမငယ်လေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေလေပြီ။ သူမတို့အရွယ် အခြားသော မိန်းခလေးများလုပ်နိုင်သည့် မည်သည့်အလုပ်မျိုးမဆို အဲန်နီကလည်း လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံး ပြာပြာလွင်လွင်ဖြင့် နေသာနေကာ ၀န်းကျင်တစ်ခွင် လှပသာယာနေသော နွေဦး၏ နေ့လည်ခင်း တစ်ခုတွင် အဲန်နီနှင့် သူမ၏မိခင် ဒိုင်ယာနာတို့သည် အိမ်နှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ မြက်ခင်းတစ်ခုပေါ်တွင် ထိုင်ကာ အဲန်နီ၏အစ်ကို ဘရိုင်ယန် ပါဝင်ကစားသော ဘေ့စ်ဘောအသင်း၏ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနေပုံကို ကြည့်ရှုအားပေးနေခဲ့ကြသည်။ ဘရိုင်ယန်၏ အားကြိုးမာန်တက် ကစားနေပုံကို ကြည့်ကာ အဲန်နီလေးမှာ မရပ်မနား လက်ခုပ်လက်ဝါးများတီးကား အားပေးနေလေသည်။ ဒိုင်ယာနာကတော့ သမီးလေးပုခုံးကို ခပ်ဖွဖွလေးဖက်ကာ လှုပ်ရှားတက်ကြွ ပျော်ရွှင်နေသော သမီးငယ်လေးကို ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေခဲ့သည်။ သူမတို့သမီးလေးသည် ယခုလိုမှ အရွယ်ရောက်လာပါ့မလား၊ ဦးနှောက်အသိဥာဏ်မှ ဖွံ့ဖြိုးပါ့မလားဟူ၍ ခြောက်အိပ်မက် မက်ခဲ့ရသော နေ့ရက်များမှ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် သမီးလေးမှာ လက်ခုပ်တီးနေရာမှ ရပ်လိုက်ပြီး နှာခေါင်းလေးကို ရှုံ့ပွ ရှုံ့ပွလုပ်ရင်း လေထဲမှာ အနံ့ခံနေတော့သည်။ ပြီးနောက် ဒိုင်ယာနာလက်မောင်းကို ဖက်လိုက်ပြီး “မေမေ.. မေမေ့နှာခေါင်းမှာ အနံ့တစ်ခုခု မရဘူးလားဟင်။” ဟု သူမကို မေးလေသည်။ သူမကလည်း သမီးလုပ်သကဲ့သို့ နှာခေါင်းထဲသို့ လေကို ရှုသွင်းလိုက်ပြီး အနံ့ခံကြည့်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက်တော့ သူမ ဘာအနံ့ကိုမှ မခံစားမိပေ။ သို့သော် ခဏတွင် သူမ သိလိုက်သည်။ မိုးသားတိမ်ရိပ် မရှိပါဘဲနှင့်လေထဲတွင် နှစ်သက်စဖွယ် အနံ့တစ်မျိုးလေး ရနေသည်။ ထိုအနံ့သည် မိုးရွာတော့မည့် မိုးနံ့သာဖြစ်လေသည်။ နွေဦးမိုး ရွာလေတော့မည်။ “မေမေ အနံ့ရလားဟင် ” ဟု သမီးလေးက ပြန်မေးသောအခါ ဒိုင်ယာနာ ပြုံးလိုက်ပြီး ခေါင်းညိတ်ပြကာ “ရတာပေါ့ သမီးရဲ့ မိုးရွာတော့မဲ့ အနံ့လေ။ မိုးနံ့ပေါ့” ဟု ပြန်ပြောလိုက်လေသည်။ သမီးလေး အဲန်နီက ခေါင်းကို အသာအယာညိတ်လိုက်ပြီး “ဟုတ်တယ်မေမေ.. မိုးနံ့ ရနေပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးမြလန်းဆန်းစေနိုင်တဲ့ အဲဒီအနံ့ကို သမီးတော့ မေမေ့ရဲ့ မေတ္တာနံ့လို့ တင်စားချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မေမေရဲ့ မေတ္တာက သန့်စင်တယ်။ အေးမြတယ် တကယ်တမ်းတော့ သမီးအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရတာဟာလည်း ပြင်းပြတဲ့ မေမေရဲ့ မေတ္တာစိတ်ကြောင့်ပါ။ အခုရတဲ့ မိုးနံ့ကလည်း အေးအေးလေးနဲ့ သန့်စင်နေတယ်လေ။ ဒီတော့ အဲဒီ မိုးနံ့က မေမေရဲ့ မေတ္တရနံ့နဲ့ တူနေတာပေါ့ မေမေရဲ့”။
ပြုံးပြုံးလေး ပြောနေသော သမီးလေး အဲန်နီရဲ့ စကားသံက သူမရင်ထဲ အေးမြလန်းဆန်းလို့ သွားစေခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆုံး၍ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ လက်ပြကာ သူမတို့ ရှိရာဘက်သို့ လျှောက်လှမ်းလာနေသော သားလေး ဘရိုင်ယန်၏ အပြုံးကလေးကလည်း သူမကို ကြည်လင် ရွှင်လန်းစေနိုင်သည်သာလေ။ အိုး.. မကြာခင်ရွာတော့မည့် မိုးရနံ့သည်လည်း သူမ ချစ်သော သားသမီးတို့၏ မေတ္တာရနံ့နှင့် အတူတူသာ ဖြစ်သည်ဟု သူမ ထင်ပါသည်။ မေတ္တာရနံ့တို့မည်သည် အေးမြစေသော သဘောရှိသည် မဟုတ်လားနော်။ အနားသို့ ရောက်လာသော သားနှင့် သမီးကို ပွေ့ပိုက်လိုက်ရင်း သူမရင်ထဲတွင်တော့ ကြည်နူးပီတိအဟုန်တို့ကြောင့် အေးမြလန်းဆန်းကာ ငြိမ့်ငြိမ့်ညင်သာလေး ခံစားနေမိရတော့သည်။
Stephen ရဲ့ The smell of rain ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပါသည်။